हे भगवान के देख्नुपर्यो ! गाडीले हानेर ढाड भाँचिएपछि बिस्तारामै दिसापिसाब, बरर आशु झार्ने पिडा – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/हे भगवान के देख्नुपर्यो ! गाडीले हानेर ढाड भाँचिएपछि बिस्तारामै दिसापिसाब, बरर आशु झार्ने पिडा
त्यसै त दुखी परिबार झन दुखमा पर्दै जान्छ । भैरहवा उपचार गराउदा सम्पती सकियो अहिले पाल्पाको तानसेन मिसन अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ तर जब हामी त्यहा पुग्यौ उनी घाउको दुखाई र तडपाईले छटपटीरहेका थिए । त्यहा पुग्दा हामीले यो सोच्यौ कि मानिसको जिन्दगी र भगबान पनि गरिबप्रति किन यसरी निर्दयी भएका होलान । यो परिबारलाई अस्पतालमा जो हेर्न जान्छ सबको आखामा आशु देखिन्छ ।